Ii-FAQs -I-Smart Weigh Packaging Machinery Co, Ltd.
Nkqo Ukupakisha Machine
Umatshini wokupakisha ojikelezayo
Ukukhangela Metal Detector
Umatshini wokupakisha itreyi
Amaxabiso ethu aphantsi kweprojekthi yakho neemfuno. Siza kukuthumela uluhlu lwamaxabiso ahlaziyiweyo emva kokuba inkampani yakho iqhagamshelane nathi ngolwazi oluthe kratya.
Hayi, i-MOQ yethu ngumatshini wokuseta ongu-1. Ewe, inxenye ye-MOQ ayisiyo-1 pc.
Ewe sinako ukubonelela ngesatifikethi se-CE, isidanga sokutya esingenazitampu ezingama-304, ilayisensi yeshishini kunye nabanye.
Ngokubanzi, ukuveliswa komgca wokupakisha okugqibeleleyo ziintsuku ezingama-45. Umatshini weyunithi enye kwiintsuku ezingama-20. Ukuba unayo i-odolo engxamisekileyo, ungaqhagamshelana nathi, mhlawumbi umatshini wakho ofunekayo kwisitokhwe sethu.
Ungayenza intlawulo kwiakhawunti yethu yebhanki, TT okanye LC.
Iinyanga ezili-15 ukususela ukuthunyelwa. Isiqinisekiso secandelo lethu le-elektroniki kunye nokusebenza. Ukuzinikela kwethu kukoneliseka kwiimveliso zethu. Kwiwaranti okanye hayi, yinkcubeko yenkampani yethu ukujongana nokusombulula yonke imiba yabathengi ukoneliseka ngumntu wonke
Kuthekani ngeentlawulo zokuhambisa?
Iindleko zokuhambisa zixhomekeke kwindlela oyikhethayo yokufumana iimpahla. Indlela yomoya yeyona ndlela ikhawulezayo kodwa yeyona ndlela ibiza kakhulu. Amanzi olwandle sisisombululo esona sihle kakhulu kwiimali ezinkulu. Ngokuchanekileyo amaxabiso ezinto sinokukunika kuphela ukuba siyazazi iinkcukacha zesixa, ubunzima kunye nendlela. Nceda unxibelelane nathi ngolwazi oluthe kratya.
Idilesi: Ukwakha B, Kunxin Industrial Park, No. 55, Dong Fu Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, kwiPhondo Guangdong, China, 528425
Inombolo yomnxeba: + 86-760-87961168
Inombolo yomnxeba: 13421453686